Isikhathi esining impela abesifazane ukuya kudokotela yisihlungu wesibeletho. Lesi sifo uletha eningi imizwa engakhi. Ngaphezu kwalokho, uma imishanguzo iqhutshwe ngendlela esifike ngesikhathi, owesifazane bangase balahlekelwe ikhono bazale abantwana.
Ngenxa kokuthola izifo Izitho zokuzala yangaphakathi usungaqala ukuthuthukisa ukuvuvukala ezikhiqiza amaqanda. Izimpawu nendlela aphatha ngayo abesifazane cishe akuhlobene kubangelwa ukuvuvukala. Futhi usadinga ukuthi kungani lokhu kuyinkinga, ngoba ngezinye izikhathi yisishiso iyimpendulo okuvikela umzimba, okusho ukuthi umqalisi lesi sifo kungenzeka ingabi isici ezithathelwanayo.
Yisishiso ezivamile ezikhiqiza amaqanda, izimpawu kanye nokwelashwa kwabesifazane echazwe ngezansi, kubangele yezizathu ezilandelayo:
- umonakalo ngemishini;
- ukuvuvukala kwezinye izitho zomzimba sezisondele;
- necrosis futhi kuwuphawu lwesimila.
Nokho endaweni yokuqala imvamisa lesi sifo kufanele ukutheleleka. Kungaba webhaktheriya, fungal noma ezibangelwa amagciwane. Ngemva odlule izifo ezithathelana ngokocansi kanye nesifo sofuba yithuba eliphezulu kakhulu yokuthola ukuvuvukala wesibeletho.
Ukuvuvukala kwesibeletho futhi ezikhiqiza amaqanda - isimo eyejwayelekile umsuka ezithathelwanayo lesi sifo. Of eduze izitho ukutheleleka ngokuvamile engena igazi e kwezitho zobulili, okubangela ukuvuvukala. Ngokwesibonelo, ukutheleleka zifike zivela ebusweni umnyango besisu ka isithasiselo noma wamathumbu.
Isikhathi esining impela kubangele ukushisa:
Amagciwane lokuqala esezinzile amaqanda futhi amashubhu fallopian. Ngemva kwalokho, ezisheshayo ukuze uthole uhlelo urogenital. Izimpawu zokuqala zitholiwe izindebe zangasese, ukuvuvukala ke kwasuka nezindlala ku urethra futhi sangasese.
Kukhona izinhlobo ezintathu zesifo ezifana ukuvuvukala ezikhiqiza amaqanda. Izimpawu nendlela aphatha ngayo abesifazane kuxhomeke indlela inqubo ithatha indawo. Kungaba uhlobo acute, subacute futhi ezingalapheki.
Ifomu acute libhekene nobuhlungu obukhulu esiswini ephansi. Ukhula lwenkohlakalo egcwele kungaba kulolu hlangothi, futhi kukho kokubili. Kwasendaweni ubuhlungu akusho ngaso sonke isikhathi ukuthi kukhona, uthi, kuphela yisishiso esibelethweni kwesokudla. Ubuhlungu ingasatshalaliswa khona okhalweni, emizweni kungaba bese kudamba ke ukwandisa.
Lapho ukuvuvukala kungenzeka uzwe ubuhlungu obukhulu phakathi sexual ngakho ngesikhathi ukwelashwa kufanele ulahle noma yikuphi ukuthintana.
Uma ukutheleleka iye kwadingeka isikhathi kuthinte urethra, kungaba inqubo ngempela nokuzwela ukuchama. Ngaphezu kwalokho, ekuqaleni noma ubovu luningi isikhwehlela kusukela ipheshana zangasese, ngokuvamile unayo i nephunga edabukisayo. inani elincane legazi kungenzeka ekhona uketshezi.
Azisekho izimpawu zendawo kuphela kodwa lokhu kubonakala ubuthakathaka ezinzima, izinga lokushisa lomzimba liyaphuma, zingaphazamisa ukulala. Isikhathi esining impela ngemuva kwalesi sifo eba ukucasuka okukhulu.
Uma isikhathi eside musa ilapha lezo zifo, ungathola ukuhlukumeza lomjikelezo consequently kunciphisa kungenzeka yokukhulelwa.
Izimpawu eshiwo ngokucacile ngokwanele, ngakho awuboni kunzima.
Ngaphezu ifomu acute kungenzeka futhi ezingelapheki ukuvuvukala ezikhiqiza amaqanda. Izimpawu nendlela aphatha ngayo abesifazane kuleli cala izoke ezahlukene.
- Ubuhlungu itholakala esiswini aphansi, imbilapho, esithweni sowesifazane. Ubuhlungu buba bukhulu bezwe izinhlungu, zomile, njalo. Lapho kubanda ubuhlungu iyanda.
- Ukwehluleka nomjikelezo wokuya esikhathini, okuholela ekusebenzeni okungafanele ezikhiqiza amaqanda.
- livela sokukhishwa engavamile.
- Ubuhlungu ngesikhathi ukuhlangana futhi kwehle isifiso.
- Nge izenzo njalo olungavikelekile yokukhulelwa ingekho.
ukuvuvukala Okungalapheki ezikhiqiza amaqanda akuyena ngaso sonke isikhathi ngenxa ungakaqedi ikhambi yefomu oyingozi. Ngokuvamile kwenzeka njengoba isifo eyinhloko. Izifo eziningi ezidluliswa ngocansi kungaba asymptomatic, kodwa kube provocateur ejenti amafomu ezingamahlalakhona ukuvuvukala.
Izinkinga ngemva ukuvuvukala
Kuyini ukuvuvukala kuyingozi ikakhulukazi ezikhiqiza amaqanda? Ukuvuvukala abathintekayo hhayi kuphela amaqanda kodwa futhi ipayipi nemizimba eduze zishiyane. Ama-bacterium magciwane zasakazekela umzimba. Bangakwazi bahlaselwa peritoneum, amathumbu, igazi zamanzi.
I amashubhu fallopian usungaqala ukuvuvukala, elibangela isimiso. Lokhu kwandisa amathuba okuthi umntwana ukhulela ethunjini futhi, ngenxa yalokho, le ukudabuka ipayipi. Ngokuvamile imiphumela ukuvuvukala futhi kwesisu noma kulungiswe inkinga yokungabi nenzalo yesibili. Ngaphezu kwalokho, cishe ngaso sonke isikhathi zazithinta zonke
Izinkinga ukuvuvukala eziyinkimbinkimbi
ukuvuvukala Inxanxathela libhekene izici ezilandelayo:
- ubuhlungu ngesikhathi ukuvuvukala ezikhiqiza amaqanda nge ukuvuvukala eziyinkimbinkimbi enamandla kakhulu, ikakhulukazi lapho esiswini ephansi. Ngezinye izikhathi kukhona exacerbations noma ukuhlaselwa kwenzeka ngesimo Kufinyeta.
- lokushisa umzimba anda. Uphawu ihlala isikhathi eside, kokuzama umzimba.
- Ubuhlungu ezinqulwini sacrum, kakhulu iphazamise ukuhamba.
- ukuphazamiseka kokuya esikhathini entailing iziyaluyalu hormone.
- Izimo nesenzakalo izilonda ku esibelethweni, okuyizinto babebaningi kakhulu. Ithumba Autopsy kuholela ithumba besisu.
Kuwufanele wazi ukuthi yisishiso acute ezikhiqiza amaqanda ukukhathazeka kuphela. Uma impatho ukubambezeleka, ukutheleleka sizothinta nezinye izitho eziningi, okuzoba nzima kakhulu ukuyelapha.
ingabe udokotela eyonquma kanjani ukuba khona i ukuvuvukala?
- Okokuqala, uyoyilalela izikhalazo futhi ukucacisa lokho izinqubo kanye izifo bahlupheka wesifazane. Wayedinga ukutshela futhi mayelana izindlela baqashwe
- Khona-ke udokotela sizohlola esihlalweni.
- Qiniseka ukuthi aqoke ultrasound.
- Inikeza isiqondiso sendlela yase-laboratory.
- Ezimweni eziningi, lokhu kuzokwenziwa hysterosalpingography - isifundo kwesibeletho futhi amashubhu ngosizo X-ray.
- smear phezu microflora.
Ukuvuvukala esibelethweni ngakwesokunxele, lapho izimpawu kanye nemiphumela akuhlukile ilungelo ukuvuvukala kubangela hhayi kuphela ukungakhululeki, kodwa futhi inenani emibi umsebenzi zokuzala.
Ngokuvamile, ukwelashwa kuthatha isikhathi eside. Lokhu kuhlanganisa izibhebhe ukwelashwa kanye imijovo suppositories, kanye ukumnika emthanjeni. Ukuze ukhethe elilungile lwemithi yokwelashwa kungaba kuphela wezifo zabesifazane, ungayisebenzisi yokwelashwa popular for ukuvuvukala wesibeletho. Ngesikhathi yokwelapha elilungile ngekusebentisa tinhlobo letehlukene izidakamizwa amaphilisi kuyoba yinto izidakamizwa ezengeziwe - indima enkulu kuzodlalwa ngezinye izinhlobo.
Uma uhlushwa isifo waqala ngendlela esifike ngesikhathi, kukhona ithuba lokwenza futhi kungabi nemiphumela emibi. Ngokuvamile, ukwelashwa senzeka esigulini esingalalisiwe esibhedlela, esibhedlela liyadingeka ezimweni ezehlukile, lapho izinkomba lokungenela kuhlinzwa. Phezu ukuthola we ithumba ubovu ngokushesha wasebenzisa imithi ukuvuvukala ezikhiqiza amaqanda.
Ekululameni lwaluvela luphelele futhi ngaphandle kwemiphumela, kubalulekile ukuba uqale ukwelashwa uphawu kokuqala isifo.
imithi elwa namagciwane
Wonke umuntu wesifazane kufanele bazi ukuthi self-ukwelashwa kungenzeka kuholele imiphumela engemihle kakhulu. a kuphela onguchwepheshe angakwazi ukuncoma ngokwanele kwemithi elwa namagciwane ngoba ukuvuvukala ezikhiqiza amaqanda, okusekelwe uhlobo lwegciwane kanye ngesisekelo kobukhulu isifo.
Ngemva Yiqiniso kwamaphilisi lizokwabelwa imikhiqizo kuzokwenza umzimba ukuba ululame. Kuyinto lokhu esigabeni yokwenza yokwelapha eside, esisuka ekubuyiselweni egcwele amasosha omzimba.
I penicillins ngokuvamile ezisetshenziswa ezilandelayo:
Konke lokhu izakhi nethonya ububanzi, imbangela umonakalo okuncane emzimbeni. Babevunyelwe ukuthatha ngisho nalapho ngikhulelwe futhi ibele.
abesifazane abaningi singayivumeli penicillins, ngakho udinga ukukhetha enye uhlobo antibiotic. Ngaphezu kwalokho, ama-bacterium ayakwazi azivumelanise izidakamizwa, ngakho ngeke babe munye futhi ikhambi efanayo isikhathi eside.
Uma amasosha omzimba penicillins iyoba namandla ephumelela kakhudlwana. Bona zivimbela ukukhula kwamagciwane ngaphandle ubabulala ngokuphelele. Kumelwe wenze uqobo
Ukuze silondoloze yokwelapha udinga ukuba badle ukudla okunempilo, siphuza neziphuzo kakhudlwana futhi angene ekudleni imikhiqizo yobisi.
Izidakamizwa lomcoka ukuvuvukala kukhona suppositories lwesitho sangasese sowesifazane. Ukwakheka yabo kufanele lifake chlorhexidine biklyukonat, pimafutsin futhi betadine. Amakhandlela ukubulala ayingozi.
ethandwa kakhulu "Hexicon" - yelaphe izifo ezibangelwa ukuthi wadluliselwa sexual zivuvukale amaqanda. Izimpawu nendlela aphatha ngayo abesifazane zingase zingafani, ngakho ngisho amakhandlela akufanele ukuthenga ngaphandle izincomo kadokotela.
Udokotela angase akunikeze imithi amakhandlela equkethe indomethacin. Le nto kusukela iqembu non-steroidal anti-inflammatory. Ziklanyelwe ukubhekana prostagladinami abuhlungu. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa has antiplatelet nomphumela antipyretic. Lezi amakhandlela yethulwe vaginally.
Amakhandlela iphathwa ebusuku, ngokubeka ngokujulile njengoba kungenzeka esithweni sowesifazane. nezinqubo evamile inhlanzeko wenziwa ekuseni. Ngendlela ezingamahlalakhona usebenzisa suppositories ingafinyelela isikhathi eside ukuthethelelwa.
Ukuze uqonde ukuthi izinyathelo ongazithatha, udinga ukukhumbula ngezimbangela zokuziphendukela ukuvuvukala.
Okokuqala, uma umuntu aya naye ocansini akuyona njalo, njalo ukusebenzisa ukuvikela ngesikhathi kocansi.
Okwesibili, inhlanzeko yomuntu siqu kuyadingeka ukuze owesifazane ngamunye, kanye Ukuvakashela udokotela wezifo zabesifazane kabili ngonyaka - i-masinya ukuvuvukala.
Okwesithathu, kubalulekile ukuqapha isimo jikelele umzimba ukuvimbela izigaba ezingamahlalakhona izifo ezahlukene.
Akunakusetshenziswa Awukwazi ukusebenzisa inhlanzeko zabanye abantu - lokhu kungaholela ukutheleleka yomunye.
ukufinyelela esifike udokotela wenza sikwazi ukuqeda isifo ngaphambi has isikhathi ukulimaza umzimba.
Kungani sidinga i-disk Uhlelo defragmentation futhi uzisebenzise kanjani?